अनिल गुरुङलाई ५ प्रश्न - पाँच प्रश्न - साप्ताहिक
अनिल गुरुङलाई ५ प्रश्न
नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान हुन्, अनिल गुरुङ । अनिलकै नेतृत्वमा हालै मात्र टिमले जापानको एक साताभन्दा लामो भ्रमण पूरा गरेको छ । त्यही सेरोफेरोमा गुरुङसँग साप्ताहिकको पाँच प्रश्न :
जापान भ्रमण कस्तो रह्यो ?
निकै महत्त्वपूर्ण र विशेष । हामी जापानमा फुटबल सिक्न र बुझ्न मात्र गएका थिएनौं । हामीलाई जापान बसुन्जेल प्राकृतिक प्रकोप र त्यसबाट जोगिने उपायका सम्बन्धमा प्रशिक्षणसमेत प्रदान गरिएको थियो । जापानमा पनि हाम्रोमा जस्तै लगातार भूकम्प गैरहेको हुन्छ । त्यहाँ सुनामीजस्ता समस्या पनि छन् ।
त्यहाँ सिकेका कुरा अब नेपालीहरूलाई पनि बताउने हो कि ?
त्यस्तो भए राम्रो हुनेछ, तर अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम बनेको छैन । जापानले प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन निकै ठूलो तयारी गरेको छ ।
जापानी फुटबलको स्तर कस्तो देख्नुभयो ?
निकै माथिल्लो स्तरको । मैले युरोपमा पनि फुटबल खेलेको र हेरेको छु, तर जापानी फुटबल त्यसको तुलनामा पनि राम्रो लाग्यो । जापानी फुटबलले आफ्नो आधार बलियो बनाउन धेरै काम गरेको छ ।
जापानी फुटबलको कुन पक्षले सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्‍यो ?
हामी जुन एकेडेमीमा बसेका थियौं, त्यहाँ बिहानदेखि रातिसम्म फुटबल मात्र खेलिन्थ्यो । उक्त एकेडेमीमा जस्तै ठूला स्टार खेलाडी आए पनि निश्चित अनुशासनमा बस्थे । ती स्टार खेलाडीले पनि खाना खाएपछि भाँडा आफै माझ्नुपथ्र्यो । म त्यसबाट निकै प्रभावित भएँ ।
मैदानमा नेपाली टिमको प्रदर्शन त कमजोर रह्यो नि ?
हामीले जापानमा पाँच खेल खेल्यौं, त्यसमध्ये तीनमा पराजित भयौं । नेपाली टिम २० वर्षपछि जापान पुगेको थियो । त्यसैले त्यो ऐतिहासिक रह्यो । जापानको फुटबलस्तर निकै माथि छ । जुनसकै उमेर समूहको टिम भए पनि खेल्ने स्तर र गति उस्तै छ । त्यसैले नेपाली टिमको प्रदर्शनलाई म त्यति कमजोर र खराब मान्दिनँ ।
विराट गोल्डकप आजदेखि
आफ्नै श्रीमान् काल बनेपछि
यौनप्यास मेटेपछि उम्किए कैदी
भोलि जिउँदो आकाश
राजको रंग बिनाको होली